धेरै वर्षपछि नोकियाको नयाँ स्मार्टफोन आयो, तहल्का मच्चाउने विश्वास
काठमाण्डौ । कुनै समयमा मोवाइल फोनको बादशाह मानिने नोकिया कम्पनीको स्मार्टफोन बोक्न चाहनेहरुका लागि खुशीको खबर छ । एचएमडी ग्लोबल कम्पनीले नोकियाको स्मार्टफोन चीनमा लञ्च गरेको छ । चीनमा यो स्मार्टफोनको मूल्य २४६ डलर राखिएको छ । मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार नोकियाको यो स्मार्टफोन केही सातापछि भारत, नेपाल लगायतका बजारहरुसम्म पनि आइपुग्नेछ...
काठमाण्डौ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि...
इन्फोकसको फोरजी चल्ने स्मार्टफोन नेपालमा
काठमाण्डौ । अमेरिकन स्मार्टफोन इन्फोकस ६८० नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । यस मोबाइललाई नेपाली बजारमा प्रिजम इन्टरप्राइजेजले भित्राएको हो । ५.५ इञ्चको फूल एचडी डिस्प्ले रहेको यस स्मार्टफोनमा १.३ गिगाहर्जको शक्तिशाली क्वाडकोर प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । आकर्षक, स्लिम र मेटल बडिको डिजाइनमा यो फोनका थुप्रै आकर्षक पक्षहरु रहेका...
यी ५ विधि अपनाए मोवाइल चार्ज क्षणभरमै !
काठमाण्डौ । हामीमध्ये धेरै व्यक्ति त्यसबेला बेचैन हुन्छौ, जतिबेला मोवाइल फोनको प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, तर त्यही बेला चार्ज पनि हुँदैन र मोवाइल फोन चार्ज हुन पनि निकै लामो समय खर्च भइदिन्छ । यो समस्याको समाधानको कुनै जादुुगरी विधि हुँदैन । तर केही उपायहरु भने अवश्य छन्, जसले राम्रो ढंगले ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न लाग्ने समयलाई कम...
न्यूरोडमा हालसम्मकै ठूलो मोवाइल महोत्सव हुँदै, घुम्न जानेलाई समेत उपहार
काठमाण्डौ । नेपाल मोवाइल व्यवसायी संघको आयोजना र निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्य प्रायोजनमा न्यूरोडमा हालसम्मकै ठूलो र भव्य मोवाइल महोत्सव हुने भएको छ । आगामी पुस १३ देखि १९ गतेसम्म न्यूरोडको पाको लगायतका क्षेत्रमा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । आइतबार महोत्सवको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार...
फिरौति माग्ने भाइरसले बर्बाद पार्ला नि !
काठमाण्डौ । हामी प्रायः आफ्नो कम्प्युटरमा तस्विरहरु डाउनलोड गर्छौ । तर सोच्नुुहोस् त कुनै बेला तपाईंको कम्प्युटरमा यस्तो तस्विर देखियो, जसलाई तपाईंले कहिल्यै डाउनलोड नै गर्नुभएको थिएन ? यदि यस्तो देखियो भने सम्हालिनुुहोला, कारण यो खतराको घण्टी हुनसक्छ । डिजिटल टेन्ड्सका अनुसार यस्ता अज्ञात फाइलहरु भूलेर पनि नखोल्नुहोला । यस्ता...
चोरीको मोवाइलमा नेपाली सीम नचल्ने !
काठमाण्डौ । यदि हाल भइरहेको प्रयासले केही महिनामै सार्थकता पायो भने अबैध रुपमा(भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोवाइलमा नेपालका दूरसंचार प्रदायक कम्पनीहरुको सीम चल्ने छैन । चोरीका मोवाइलले बैधानिक व्यापार चौपट भएपछि आफ्नो व्यवसायको बजारको स्थिरता र लगानी सुरक्षाका लागि एकजुट भई देशमै पहिलोपटक संगठन बनाएका मोवाइल आयातकर्ताहरुले...
इण्टेक्सले ल्यायो स्क्र्याच नहुने स्क्रीनवाला मोवाइल
काठमाण्डौ । इन्टेक्स टेक्नोलोजीले अक्वा स्मार्टफोन सेरिजअन्तर्गतको नयाँ संस्करण अक्वा रिङ (Aqua Ring) नेपालमा लञ्च गरेको छ । मोवाइलको मूल्य नेपाली रुपैयाँ ९ हजार १ सय ९९ राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । मोवाइलमा १ जीबीको र्याम, ८ जीबीको रोम, ५ इञ्चको ड्रागनट्रेल एचडी डिस्प्ले लगायतका विशेषता छन् । मोवाइलमा १.३ गिगाहर्जको क्वाडकोर प्रोसेर रहेको...
भाइबरबाट ५१ देशमा निःशुल्क फोन गर्न सकिने, अफर २ साताका लागि
काठमाण्डौ । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानिसलाई नयाँ नयाँ सुविधा प्राप्त भइरहेका छन् । पहिलो विदेशमा फोन गर्दा नै महंगो पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । भाइबर, स्काइप, फेसबुक लगायतले निःशुल्क कलको सुविधा दिन थालेका छन् । पछिल्लो समय भाइबरले निःशुल्क कलको सुविधा ल्याएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले यस्ता सुविधा दिन थालेका छन् । यही...
इन्टेक्स ३ जी स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा, मूल्य रु. ८१९९
काठमाण्डौ । इन्टेक्स टेक्नोलोजी, इण्डियाको एक प्रतिष्ठित मोबाईल कम्पनीले नेपालमा पनि अत्यधिक ब्याट्री ब्याकअप भएको एन्ड्रोइड फोन नेपालमा लञ्च गरेको छ । स्मार्टफोनमा हुनुपर्ने अधिकांश फिचर समेटिएको यो फोनमा केही नयाँ र आकर्षक फिचर समेत उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार यो फोनमा १ वर्षको वारेन्टी हुनेछ । ५ इञ्चको डिस्प्लेको सुविधा...
गुगलले ल्यायो सुविधासम्पन्न भिडियो च्याटिङ एप, स्काइप र फेसबुकलाई टक्कर दिने
काठमाण्डौ । गुगलले नयाँ भिडियो च्याटिङ एप ल्याएको छ । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई टक्कर दिने उद्देश्यले गुगलले ‘डूओ’ नामको भिडियो च्याटिङ एप लञ्च गरेको हो । एप्पलको फेसटाइम, माइक्रोफ्टको स्काइप र फेसबुकको मेसेञ्जरबाट हुने भिडियो च्याटलाई टक्कर दिन गुगलले नयाँ एप लञ्च गरेको बताइएको छ । तत्कालका लागि यो भिडियो च्याटिङ एप...
६ महत्वपूर्ण टिप्स, जसले बचाइदिन्छ तपाईको इन्टरनेटको बिल
काठमाण्डौ । यदि तपार्इं मोवाइलको इन्टरनेट बिल र धिमा गतिको इन्टरनेटबाट दिक्क हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि खुशीको खबर छ । प्रविधिले केही यस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको छ, जहाँ तपाई थ्रीजी डाटामा फोरजीको प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ । साथै, यो डाटा चलाएबापत हुने खर्च समेत निकै कम गर्न सक्नुहुन्छ । आउनुहोस्, हेरौं डाटामा खर्च कम गर्ने निकै उपयोगी ६ टिप्स...
विश्वका त्यस्ता १० देश, जहाँ २ मिनेटमै एचडी फिल्म डाउनलोड हुन्छ
काठमाण्डौ । विश्वमा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताको वृद्धिसँगै यसको स्पीड समेत बढिरहेको छ । अमेरिकाको कन्टेन्ट डेलिभरी एण्ड क्लाउड सर्भिसेज प्रोभाइडर अकामाईको ताजा रिपोर्टका अनुसार ग्लोबल्ली एक वेब पेज औसतमा ६.३ मेगाबाइट्स प्रति सेकेण्डमा लोड हुन्छ । यसैबाट थाहा हुन्छ कि कति लाख बाइट्सको डाटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एकै सेकेण्डमा...
बोल्न र सुन्न नसक्नेका लागि टेलिकमको भिडियो कल, सीम र रिम कार्ड सित्तैमा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु(बहिरा)का लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल सेवा उपलब्ध गराउने कार्य आरम्भ गरेको छ । कम्पनीको मोबाइल नम्बरमा कम्पनीको नेटवर्कभित्रका लागि मात्र उपलब्ध गराइने भिडियो कल सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (कर बाहेक) तोकिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । हाल यो योजनामा आबद्ध सिमहरुमा...
निःशुल्क डाटा र कल सुविधा चाहियो ? यी एप डाउनलोड गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । यदि तपाईं फ्रि टकटाइम वा डाटाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने कयौं एपहरुको प्रयोगबाट यो संभव हुनसक्छ । यसका लागि तपाईंले मात्र सो एपले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ र उसको विज्ञापन हेर्ने काम गरिदिनुपर्छ । विशेष गरी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरु प्राय फ्रि डाटा वा कल गर्ने मौकाको खोजीमा हुन्छन्, तिनीहरुका लागि केही एपहरु निकै ठूलो...